Ukuhlobisa kweebhotile ngezandla zabo: iklasi yeklasi, iifoto ngeenyawo
Iibhotile ezindala ziyisiseko esihle sokwenza izinto. Ubuninzi bungabhenwa ngezandla zabo. Eli nqaku liza kuba ngumhlobiso omhle wezinto zangaphakathi okanye ukuzisa amanqaku afanelekileyo ekudalweni kweeholide. Kukho iindlela ezininzi zokubhabhisa iibhotile, kodwa unokuhlala ubonisa ukucinga kwakho kwaye ufike into entsha. Ifoto ibonisa iindlela ezahlukeneyo zokudala ukuhlobisa ikhaya, kwaye ividiyo iya kunceda emsebenzini.
Umyalelo wesinyathelo ngeyinyathelo kwiibhotile zokubumba ekhaya
Ukususela kwiibhotile ezindala ungenza izinto zangaphambili. Isisombululo esihle kakhulu siyi-decor or festive. Unokwenza iibases zabo ezingaqhelekanga okanye izibane. Nantsi into ixhomekeke kwiingcamango.
Iklasi yeklasi ekuhlobiseni ibhotile ngeetyuwa kunye nopende
Ibhotile yokuqala kunye nekristythiweyo yenziwe yinto eqhelekileyo ityuwa kunye nepeyinti emhlophe. Sebenzisa ukuhlobisa:
iibhotile ezicocekileyo nezomileyo ngaphandle kweebhali;
ityuwa yokubhabha yombala omhlophe;
ibhanti ye-elastic ebuncinci be-50 mm.
Kwinqaku! Ukuba le fantasy ichaza ukuba ihombise ngokusemgangathweni izixhobo ezithile zokuhlobisa, kuthini ukuthatha kunye nabo.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo uza kudala into eyenziwe ngesandla eyenziwe ngesandla eyakuba yinto ekhangelekileyo ngaphakathi okanye iququzelele ukuhlobisa kweeholide. Inyathelo 1 - Ibhendi e-elastic ikonda kwibhotile ngokulandelelana. Kumele uthinte iglasi ngokuqinile. Kubalulekile ukuba izinto eziphathekayo azithethi nakwiindawo ezithile.
Inyathelo 2 - Ngoku unokwenza umbala. Kukulungele ukwenza loo msebenzi kwisitrato, kodwa kuyafaneleka ukukhetha indawo ekhuselweyo emoyeni. Oku kuya kuthintela ukuthungca uthuli kunye nentsipho phezu kwebhotile. Ngaphantsi kwezantsi kufuneka ubeke ibhokisi yesihlangu elidala. Xa yonke imisebenzi yokulungiselela igqityiwe, ungaqhubeka nesigaba sokufaka isicelo sokupenda. Emva koko ibhotile ishiywe ukuba yome.
Inyathelo 3 - Ngokulandelayo, umbhobho we-bhotile kufuneka usasaze ngeglue. Iityuwa ezimhlophe zixutywa kwiphepha. Kuyo kwaye kufuneka uqhube amaxesha ambalwa kwibhotile. Kuhlala kuphela ukunika ibhotile into eyomileyo. Xa iglue iqhwa, kufuneka ususe i-elastic kwibhotile. Ngendlela, endaweni yalo ungasebenzisa iteksi yokuhlobisa. Yenza oku ngenyameko, ukuze ungalonakalisi ityuwa kunye neendwende zepende.
Iklasi yeklasi kwiibhotile zokuhlobisa kwindlela yokwenza i-decoupage
Ukuhlobiswa kweebhotile ngezandla zabo kungenziwa kwindlela yokwenza i-decoupage. Ubuchule obunjalo buya kubakho umdla kwaye abuyi kubangela ubunzima obukhethekileyo. Ukusebenzisa imiyalelo, yenze imboleko yokuqala yendlu okanye umhlobiso weeholide ayiyi kuba nzima. Ukusebenza kuyimfuneko ukuyisebenzisa:
ipeyinti yelinki neyelinen emhlophe
ukuxubha inombolo ye-12;
i-sponge foam okanye isiponji;
indebe enzulu yokwehlisa iglue.
Inyathelo 1 - Okokuqala, ibhotile ihlambulukileyo, kwaye umgangatho wayo uphantsi. Iilebhile ezisuka kwisitya ziyakususwa ngumbumba wokuqala ubusuku. Emva koko iphepha liyakususwa ngokulula ngendwangu yokuhlamba. Izintsalela zokubambelela zingasuswa kunye nayiphi na isisombululo, kuquka i-acetone. Emva kokuba ibhotile sele yomile, ungaqala ukudala ukwakhiwa. Ngamaxesha onke ama-stylish look and stylish looksheets, kunye ne-napkin, apha ngentla.
Inyathelo 2 - Dweba izandla ukuze unqunyulwe emaphethelweni kwaye unamathele kwibhotile, ukuba ucinge ukuba uhlobo luya kubonakala njani. Umakishi ubeka indawo yendawo ezayo ye-napkin.
Inyathelo 3 - Ukusebenza ngendwangu. I-Chintz kufuneka inqunywe kwimigqomo engabonakaliyo. Ukugqwesa ukuba loo nto ikhulile kunye ne-shabby. Le ndoda inqabile kwaye iyanyaniseka emsebenzini. Kuya kuvumela ukuba kulungiselelwe iifolthi ezicocekileyo kunye neenqabileyo. Umfanekiso kule meko ayidlala indima, kuba kuya kufuneka ukuba upende.
Inyathelo 4 - Umgca we-chintz ufakwe kwi-PVA glue. Ukuze kube lula ukusebenza, kucetyiswa ukuba uthele umbane kwisitya esibanzi. Ukunamathela okunamandla kakhulu akufanele kusetyenziswe. Inokuhlaziywa xa kuyimfuneko ngamanzi kwisilinganiselo se-1: 1.
Inyathelo lesi-5 - Iifomthi zamathambo kufuneka zifakwe kancinci, emva koko zifakwe kwibhotile. Ukugqithisa ukuguqulwa kugqithise isitaladi kunye nenhle, kufuneka udale imibimbi ngezandla zakho. Akukho mithetho apha - kufuneka usebenze ngokukhawuleza. Kodwa indawo ekhethiweyo njengomzobo akufanele ifakwe.
Inyathelo 6 - Umele uvumele ibhotile ibume. Le yinkqubo ende, kwaye inokuthatha iintsuku eziliqela. Xa isitya soma, peyinisa ityhidi ngepeyinti ye-acrylic emhlophe. Ukwenza oku, kufuneka usebenzise ibrashi. Ukupenda ngokucacileyo iifolda, kufanelekile ukuthatha isiponji okanye isiponji se-foam. Ukuba kuyimfuneko, loo mveliso icwecwe kwiinqanaba eziliqela. Into eyona nto kukuba iglasi ayikhanyeli.
Inyathelo lesi-7 - Xa ipeyinti idlile, kufuneka ulungise iphethini yeglue kwipuphu ecikiweyo ukwenzela i-decoupage. Amacandelo alo aphezulu kufuneka asuswe. Uhlala kuphela nenxalenye ngomfanekiso. Ummandla ofunekayo utyongwe ngeglue, kunye ne-napkin isetyenziswe kuyo.
Isinyathelo 8 - Umgangatho we-napkin uphathwa ngeglue. Yisasaze kwiziko ukuya kumida. Umfanekiso uhlanjululwa kancinci ngebhashi. Into ephambili akuyikuguqula iphepha.
Inyathelo 9 - Ngoku kufuneka uhambe kancane kunye nepenki elibomvu phezu kwebhotile. Ukusebenza kufuneka kube lula, nje ukuchukumisa iifolda.
Inyathelo 10 - Emva koko sebenzisa ii-2-3 zomqolo we-acrylic lacquer. Emva kwonyango ngalinye, imveliso kufuneka imiswe.
Yikho konke! Ibhotile kwindlela yokuguqulwa kwengubo kunye neengubo kunye ne-napkins ikulungele.
Ikhosi yeklasi kwiibhotile zokuhlobisa ngemicu
Kwaye abaqalayo kule ndlela yokutya okanye abantwana baya kuba nako ukuhobisa ibhotile ngezandla zabo. Ukuphumeza le nkosi kwiklasi, kufuneka ulungiselele:
iintambo zaliphi na ubungakanani kunye nomthunzi;
ibhotile nayiphi na indlela;
I-PVA yokubambisana okanye iteksi yokubambelela emibini;
nayiphi na into yokubhabisa (amaqabunga owomileyo, ubunzima, iintsiba, i-seashells, njl.).
Inyathelo 1 - Faka i-glue kwi-bhotile. Ukuba kunqunywe ukuba kusebenze iteksi yokumathisela, ngoko umthamo unxibe ngeenxa zonke.
Inyathelo 2 - Ngoku kufuneka uqale ukuqhawula intambo ebhotile. Qalisa umsebenzi ngokufanelekileyo ukusuka phezulu, ukusuka entanyeni.
Inyathelo 3 - Xa isitya siphelelwe ngokupheleleyo ngemicu, sihombise. Unokuyihobisa ibhotile ngokwentetho yakho kunye nomnqweno. Imidwebo emihle yengubo okanye izitampu, iintsimbi kunye nobuhla bebukeka bukhulu kuyo. Ukuhlobisa kulungelelaniswa neglue.
Yikho konke! Ukuhlobisa ibhotile elula ngezandla zakho kulungile!
Ikhosi yeklasi ekuhlobiseni iidibhoni
Le klasi yeklasi izakudala ukuzonwabisa kwemikhosi. Ukuze ubuchule kubalulekile ukuba uthathe:
malunga ne-3.5 m yebhebhoni ye-satin;
glue "I-crystal yamama";
1.5 i-ribbon yegolide;
iintsiba, ubuhlalu, iilisi.
Inyathelo 1 - Thatha ibhotile ye-champagne. Itheyipu isetyenziswe kuyo kwaye ilinganiswe. Imali efunekayo kufuneka inqunywe. Ukwenza umhlobiso, kufuneka ubeke ingongoma kwisitya kunye neglue. Inqabiso yokubhinqa ijikeleza isiseko, ichukumisa amanqaku afanayo. Yilungise ngokucophelela ukwenzela ukuba imiphetho ingahambi kwaye ungagqithisi.
Inyathelo 2 - Ukulandela lo mgaqo, kufuneka ulungise isicatshulwa sesibini sokuhlobisa. Unokuyihobisa ibhotile ngokwemodeli ekhumbuza i-pigtail. Ngendlela efanayo, imihlobiso eqhubekayo (i-3 ne-4) iyenziwa.
Inyathelo 3 - Ngoku kufuneka uhlobise isiseko kunye ne-tape brocade. Ikwalinganiswa kwakhona, inqunywe kwaye ihlanganiswe neglue. Kodwa kukufanelekile ukukhumbula ukuba izinto ezinzima kunzima kakhulu ukunweba. Imiqolo emibini idalwe kule ncoko.
Inyathelo 4 - Ukususela kwinqanaba lentamo ukuya ngasezantsi, i-ribbon yegolide isungulwe, ekwabiwe kwangaphambili. Kubaluleke kakhulu ukubeka iliso kwimeko yomsila. Kuhlala nje ukuyiguqula kwaye ulungise izinto ezongezelelweyo zomhlobiso. Njengoko ubona, ukuhlobisa ibhotile ngezandla zakho kulula. Ifoto iya kunceda emsebenzini.
Ividiyo: indlela yokuhlobisa iibhotile ngezandla zakho
Olu hlobo lwenkunkuma kwaye wenze ezinye izandla zangaphambili ziza kukunceda ukuba uthathe iifoto kunye namavidiyo.
Iipateni zeedopi zombhali
Amagqabha eeklabishi afakwe
Oko kufuneka ukwazi malunga nosana kwiinyanga ezi-7
Iingcobo ebomini bomntu
Amantombazana aseNdiya amabhinqa obuhle
Indlela yokukholisa abazali isiqingatha kwintlanganiso yokuqala
Kuperoz - "iinkwenkwezi" kumzimba wesetyhini
Amaphupha ama-Erotic kunye nesondo kwiphupha
Ubomi besondo emva kokubeleka
Indlela yokuhlobisa igumbi lobusuku obusondeleyo
Shchi kusuka e-sorrel kunye neqanda
Ikhumba lomntwana: i-pros and cons of a laser epilator
I-Horoscope ngoNovemba ka-2017 - Umfazi waseCapricorn - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl